မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့နှင့် Korea Importers Association ( KOIMA ) တို့ ပူးပေါင်းပြီး “Myanmar- Korea Business Forum & Seminar” ကို Sule Shangri- La Hotel ၌ ကျင်းပခြင်း
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့နှင့် Korea
Importers Association ( KOIMA ) တို့ ပူးပေါင်းပြီး “KOIMA BUSINESS MATCHING” ပွဲကို Sule
Shangri- La Hotel, Myanmar Ballroom, Yangon ၌ ၇.၆.၂၀၁၆ ရက်နေ့၊ နံနက် ( ၉:၃၀ ) နာရီတွင်
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Yoo Jae Kyung ၊Korea Importers
Association ( KOIMA ) ဥက္ကဌ Mr. Myoung- Jin Shin ဦးဆောင်သည့် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်စိုး၊
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်နော်မူတာကပေါနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များ နှင့်စက်မှုလက်မှု
လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးမျိုးသက်၊ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများ အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊
မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချသူများအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံလက်မှုအနုပညာ
လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပဲမျိုးစုံနှင့်နှမ်းကုန်သည်များအသင်း၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ သစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ ရာဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကြက်သွန်နီ၊
ကြက်သွန်ဖြူနှင့်စားဖိုချောင်သီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ရောင်းချသူများအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဧည့်သည်တော်များ အပါအဝင်
စုစုပေါင်း ( ၁၄၀ ) ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့ကြပါသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်စိုး၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Yoo Jae Kyung ၊ Korea Importers Association
( KOIMA )မှ Mr. Myoung Jin Shin နှင့် UMFCCI မှ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ဒေါက်တာမျိုးသက် တို့မှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်
အဖွင့်အမှာစကားများကို အသီးသီးပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ MYANTRADE မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်နော်မူတာကပေါမှ
“MYANTRADE” နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို Power Point များဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ နေ့လည် (၁၄:၀၀)
နာရီမှ (၁၇:၀၀) နာရီအထိ ကိုရီးယားနှင့် မြန်မာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအကြား စီးပွားရေးတွေ့ဆုံပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
Myanmar- Korea Business Forum & Seminar (B2B) ပွဲသို့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Myanmar- EU Helpdesk ဖွင့်လှစ်ခြင်း
EU Helpdesk ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ရန်ကုန်မြို့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊
ဒုတိယထပ်ရှိ GIZ ရုံးခန်း၌ နံနက်(၁၀)နာရီတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန(MYANTRADE) မှ
ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်စိုးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ Mr. Fritz Hendriks ၊ Team Leader of TDP ၊
Mr Lorenzo Pascotto ၊ Programmer Officer EU Delegation in Myanmar ၊ Mr. Filip A.
Lauwerysen ၊ Executive Director from EuroCham Myanmar, Mr. Steffen Grammling နှင့်
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် ပြင်သစ် CCI ၊ KOTRA ၊ JETRO ၊ JICA တို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်
ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် Trade Development Programme ၏ Team Leader Mr. Fritz Hendriks ၊
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့ ခေတ္တညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဦးအောင်စိုး ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပ သမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ် Programee Officer Mr. Lorenzo Pascotto နှင့်
EuroCham Myanmar မှ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr. Filip A. Lauwerysen တို့က အမှာစကားများ
ယခုကဲ့သို့ EU Helpdesk ဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂသို့ ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့နေသည့်
လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ် စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်
သိရှိလိုသော ဥရောပသမဂ္ဂဈေးကွက် သတင်းအချက်အလက်များကို အဆိုပါ Helpdesk ပံ့ပိုးဖြန့်ဝေပေးမည်
ဖြစ်သဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပို့ကုန်တင်ပို့ရာတွင် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အကူအညီများ
ပထမအကြိမ် မြန်မာ - တရုတ်(တိုင်ပေ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက်နေ့(ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)တွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပထမအကြိမ် မြန်မာ - တရုတ်(တိုင်ပေ) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပထမအကြိမ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့် ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှ နောက်ဆက်တွဲ အ ကြောင်းအရာများအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်ပြီး မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (တာဝန်) ဦးအောင်စိုး ဦးဆောင်၍ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဦးဟန်၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနများမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူ (၂၇) ဦးနှင့် တရုတ်(တိုင်ပေ) စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဗျုရိုမှ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် Ms. Shu-Mei Yang ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ဝင် (၁၆) ဦးတို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ နှင့် နှစ်နိုင်ငံကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် MOU များ ရေးထိုးရေးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး တရုတ်(တိုင်ပေ) ရှိ International Economic Affairs မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရာထမ်း(၂)ဦးအား ပညာသင်ဆုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ၏ ကဏ္ဍအလိုက်ရုံးအဖွဲ့များနှင့် အပါတ်စဉ်ပုံမှန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း
အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ၏ ကဏ္ဍအလိုက် ရုံးအဖွဲ့များနှင့် အပါတ်စဉ်ပုံမှန်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း အစည်းအဝေးကို (၂၃.၅.၂၀၁၆) ရက် နံနက် (၁၀း၃၀) နာရီ မှ နေ့လည် (၁၂း၀၀)နာရီထိ နာရီထိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး ပဉ္စမထပ်ရှိ အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာန အစည်းအဝေးခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။
အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမှ အမျိုးသားပို့ကုန်မဟာဗျူဟာကဏ္ဍအလိုက် ရုံးအဖွဲ့နှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာန အသင်းအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား NES Action Plans များကို ဖတ်ကြားရန်မှာကြားပြီး၊ ITC မှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်က ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ အမှုထမ်းအရာထမ်းများနှင့် စီးပွားကူးသန်းဝန်ထမ်းများအား ရှင်းလင်းပြောကြားဆွေးနွေးသွားပါသည်။ ဝန်ထမ်းများကလည်း မိမိတို့သိလိုသည်များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး (၁) ဦး၊ ITC မှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် (၁) ဦးနှင့် ကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ရှိသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကြီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ စုစုပေါင်း (၉)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
MESSE NAGOYA 2016 စက်မှုကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပမည်
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နာဂိုရာမြို့တွင် MESSE NAGOYA 2016 စက်မှု ကုန်စည်ပြပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၆) ရက်နေ့မှ (၂၉) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြု လုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ စက်မှု ကုန်စည်ပြပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီများ ပါဝင်ပြသရန် နာဂိုရာ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင် များ အသင်းချုပ်မှ ဖိတ်ကြားလာ ပါသည်။
အဆိုပါ ကုန်စည်ပြပွဲသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကုန်စည်ပြပွဲများတွင် အကြီးဆုံး တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ နာဂိုရာ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် Aichi Prefectural Government ၊ City of Nagoya တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြပွဲကာလတွင် Seminar များ၊ Business Matching များ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
ကုန်စည်ပြပွဲ္ပ၌ ပါဝင်ပြသခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ကုမ္ပဏီများ သည် နိုင်ငံတကာမှ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စီးပွားရေးချိတ်ဆက်နိုင်မှုများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ လာရောက်ပြသမည့် ကုမ္ပဏီများအား ပြခန်းနေရာအတွက် စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို လာရောက်ပြသမည့် ကုမ္ပဏီ မှ ကျခံရမည်ဖြစ် ပါသည်။ ပြခန်းတစ်ခန်းလျှင် ဂျပန်ယန်း (၁၆၂၀၀၀) ပေးချေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လေ့လာသူ အနေနှင့်လည်း သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ပါဝင်စားသူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တက်ရောက်လိုသည့် ကုမ္ပဏီ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် မြန်မာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန၊ ကုန်သွယ်မှု မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမှတ်- ၂၂၈-၂၄၀၊ ရွှေဘုံသာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း- ၀၁ ၂၅၄၀၂၄၊ ဖက်စ်- ၀၁ ၂၅၄၀၂၃၊
Email:[email protected] (link sends e-mail) သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။